အစားလည်းရှောင် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပေမယ့် ၀ိတ်မကျလာတာ ဘာကြောင့်လဲ?
Home General Knowledge အစားလည်းရှောင် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပေမယ့် ၀ိတ်မကျလာတာ ဘာကြောင့်လဲ?
လူတော်တော်များများက ၀ိတ်တော့ကျချင်ကြတယ်။ ဘာလို့မကျလာလဲဆိုပီးစိတ်ပျက်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ကို ယ် ထင်သလောက်မကျလဲဆိုတာတော့ရှင်းတယ်၊ ၀ိတ်ချတဲ့နည်းလမ်းတွေမမှန်ကန်လို့ပေါ့။
ဒီတော့ဘယ်အရာတွေက သင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျသွားဖို့ ဟန့်တားနေလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လို့ရအောင် အောက်ကဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်……..
ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ဆဲလ်အားလုံးဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်အားလုံးကATPသို့မဟုတ်Adenosine Triphosphate လိုအပ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါက ကြွက်သားကျုံ့ခြင်း၊ အာရုံကြောကိုတွန်းအားပေးခြင်းနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ခြင်းစတဲ့ အတွင်းပိုင်းဖြစ်စဉ်တွေအတွက် စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
ATP ကိုဆယ်လူလာအသက်ရှူခြင်း (cellular respiration) လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်ထားပီး အဲ့ဒါက ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေရဲ့ လောင်စာအရင်းအမြစ်လည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမိတဲ့အခါ လူတစ်ဦးရဲ့ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ဂလူးကို့စ်အဆင့်တွေမြင့်တက်လာပါတယ်။
တုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့ အသည်းရဲ့ ပန်ကရိယကအင်ဆူလင်(Insulin)လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်ခုကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့က သကြားဓာတ်တွေကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေဆီပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်ဆူလင်က လူ့ဘ၀ အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမယ့် ပိုလျှံစွာထုတ်လုပ်တဲ့အခါ အဆီသိုလှောင်ခြင်းကိုအားပေးပါတယ်။
ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦး ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နိုင်ပြီး အစာစားပြီးတောက် ၂နာရီခန့်အကြာမှာ သွေးထဲက သကြားပမာဏစာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အနည်းဆုံး၁၀၀ng/dlလောက်ထိပြန်ကျသွားတာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံဆဲလ်တွေမှာ အဆီတွေေစုလာပြီး အင်ဆူလင်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အားနည်းသွားပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ အင်ဆူလင် မရတဲ့အခါ အင်ဆူလင်ခုခံခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကိုတိုးစေပြီး နောက်ဆုံးမှာ အမျိုးအစား၂ဆီးချိုရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အင်ဆူလင်ခုခံနိုင်စွမ်းဖြစ်စဥ်ကြောင့်အောက်ကအချက်တွေဖြစ်စေနိုင်သလို ဒီအချက်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်း (သို့) အဆီများလာခြင်း
ဒါကိုလျှော့ချဖို့ အစာစားတိုင်း ပရိုတိန်း၊ ဖိုင်ဘာနှင့်အဆီပါ ၀င်တဲ့အစာတွေစားပေးရပါမယ်။ ဒီအာဟာရတွေက သွေး ကြောက ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်စုပ်ယူမှုကို နှေးကွေးစေပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုက ဟော်မုန်းများနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းတွေဟာ BMR (Basal Metabolic Rate) ကိုထိန်းညှိပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်လွှမ်း မိုးမှုရှိပါတယ်။
လူတစ် ဦး ရဲ့BMR ဆိုတာက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိပဲ နေ့စဉ်နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏာပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ cortisol, testosterone, estrogen နှင့် progesterone စတဲ့ ဟော်မုန်းတွေက BMR ကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
လူတစ်ဦး ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနဲ့ အစာစားခြင်းလို“ မှန်ကန်သော” အရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နေရင်တော့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
သွေးထဲမှာရှိတဲ့ သကြားဓာတ်မညီညွတ်ခြင်းကလည်း ဟော်မုန်းမညီမျှမှုတွင်ပါ၀င်နိုင်ပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ စနစ်အားလုံးက အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေတာကြောင့်ပြဿနာအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။
ရှေးခတ်ဂရိဆရာ၀န်ကြီး ဟစ်ပိုကရက်က “ရောဂါအားလုံးဟာ အူကစတယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့စကားကိုပညာရှင်တွေအားလုံး နှစ်ပေါင်းများစွာ လျစ်လျူရှုထားခဲ့ပါတယ်။နောက်မှ အူနဲ့ပက်သက်တာတွေလေ့လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့” အူဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဒုတိယဦးနှောက်လို့ရည်ညွန်းပြီးအူက အတွင်းပိုင်းဖြစ်စဉ်တွေအတွက် အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့”လက်ခံလာကြတော့တယ်။
အူလမ်းကြောင်းမှာအကျိုးရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေရှိနေတာက ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိမှုနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အူထဲမှာမကောင်းတဲ့ ပိုးမွှားတွေများနေပြီး လိုအပ်တဲ့ဗိုင်းရပ်တွေနည်းနေတဲ့ မညီမျှမှုတွေကြောင့် ကို ယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် အဟတ့်အတားဖြစ်စေတဲ့အချက်ပါပဲ။
လူတစ်ဦးရဲ့ အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာ ကောင်းမွန် ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့အရာများစွာရှိပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်း၊ မပြုပြင်ထားသောအစားအစာများစားခြင်း၊ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ဒိန်ချဉ်နှင့် sauerkraut စတဲ့ အချဉ်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစား အစာတွေပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံမှာ အားထုတ်မှုက ကြီးလေးတဲ့ ဘက်တီးရီးယားမညီမျှမှုကိုပြုပြင်ဖို့မလုံ လောက်ပါဘူး။
ကျွန်ုတော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေ၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာရုန်းကန်မှုတွေ၊ ကလေးတွေနှင့်ဆက်ဆံရေးတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့က အမြဲတမ်းရှေ့တန်းတင်နေကြပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာသက်သက်သာဖြစ်မယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ ဒါက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။
Stress သည် cortisol လို့ခေါ်တဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကိုတိုးစေတဲ့ Sreoidဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ မည်သည့်သန့်စင်ထားသော သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထားသောအစားအစာမဆိုပင်လျှင်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်တိုးစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှု(Stress)တွေများနေတာက သင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျသွားအောင် တားဆီးထားတဲ့ လျို့၀ှက်ချက်တစ်ခုပါပဲ
မင်း ဘာလို့၀ိတ်မကျဘူးလဲဆိုတာက မင်းကိုမင်းစိတ်ပျက်စေပြီး မင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေအတွက် ထိခိုက်နိုင်ပါတ ယ်။ အားကစားခန်းမဘယ်လောက်သွားသွား မင်းလိုချင်တဲ့ ၀ိတ်ကိုမရဘူးဆိုတာ ကိုယ်တွင်းဖြစ်စဉ်တွေမှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေတဲ့ လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခက်ခက်ခဲခဲစားတဲ့အလေ့အကျင့်ကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကို Sressဖြစ်စေပါတယ်။ အဓိကကတော့ သိကြားမပါတဲ့အစာတွေလောက်ကို ရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တာတွေကိုရှောင် လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လေးလုပ်ပြီး အပေါ်ကအချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ၀ိတ်အမှန်ကျလာစေနိုင်မှာပါနော်…..
Previous articleလူသေဆုံးမှု အများဆုံးဖြစ်စေသော ထိပ်ဆုံးစာရင်းဝင် တိရိစ္ဆာန်များ အပိုင်း (၁)
Next articleသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ခေါင်းအစခြေအဆုံး အကျိုးဖြစ်စေနိုင်မယ့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ